Ama-Chemical Mechanical Ceramic Seal Faces China Manufacturer
Home > Imikhiqizo > IziKhalazo zeCeramic > I-Ceramic Seal Faces > Ama-Chemical Mechanical Ceramic Seal Faces
Njengoba i-aluminium oxide (i-alumina) inikeza ubulukhuni obuphezulu, ukumelana nokumelana okuhle, ukushaqeka okuhle kwe-thermal, nokuphikisana nomzimba. Lezi zici zenza i-alumina ifanele ubuso bomsakazo. Lezi zibonakaliso ze-ceramic zisetshenziselwa izindawo ezimbi ezifana ne-asidi, i-alkaline, imvelo yesikhala se-salin.
Ukuze uhlangabezane nesidingo samakhasimende, kunokukhethwa kokukhethwa kukho okuluhlaza okwenziwe ngobuningi bomshini obunama-ceramic, kufaka phakathi i-alumina, i-zirconia ne-silicon carbide.
Siphinde sinikeze nezinye izinhlobo ze-ceramic seal eceleni kobuso be-ceramic seal, njengama-discs e-ceramic, izindandatho ze-ceramic seal, i-valve ye-ceramic ibhola nokunye okunye.
Gqoka umgogodla we-spice grinder alumina cumamic core
Ama-Seal Seal Faces
Ama-Sealical Seal Faces
I-Alumina Seal Faces